01 | juin | 2021 | InfoKmada
Accueil 2021 juin 1
Fanafarana vaksiny : tokony hamafisina ny fiaraha-miasa amin’ny sehatra rehetra
InfoKmada - 1 juin 2021 0
Raha tiana ny hanatratrarana ny fetr’isa takian’ny OMS amin’ny fanaovam-baksiny eto Madagasikara, tsy tokony hionona fotsiny amin’ny INITIATIVE COVAX ihany ny fanjakana fa hanetsika ny lalana rehetra mety hahazoana ny vaksiny anatin’ny mangarahara. Ilaina ny fametrahana drafitra matipaika mahakasina ny fanaovam-baksiny raha ny nambaran’ireo misehatra amin’ny fitsaboana.
Misy fivoarana ny toe-draharaha any Midongy Atsimo amin’izao fotoana izao. Efa saika tafaverina amin’ny tompony avokoa ireo omby lasan’ny andian-dahalo. Ao anatin’ny fanaterana ny fanampiana any an-toerana ihany koa ny angidim-by nanomboka androany ary velom-panantenana tamin’ny kabarin’ny filoha omaly ny vahoaka ny amin’ny hijerevana akaiky ity distrika ity.
Oniversite – Fianarantsoa : nanakatona ny Office du Bacc ireo mpandraharaha
Niroso tamin’ny fanakatonana ny « Office du Bacc » ao Ambalapaiso mpiasa mpandraharaha eo anivon’ny Oniversiten’i Fianarantsoa androany. Ireo mpandraharahan’ny Oniversite izay nilaza fa tsy hiverina amin’ny asany raha tsy misy aliny mahafa-po ay amin’ny minisitera tompon’andraikitra.
« Rocade d’Iarivo » : mamarana ny asa ankehitriny ny orinasa
Miditra amin’ny dingana famaranana ny fanamboarana ny lalana Rocade-n’Iarivo, na ny Rocade Est Nord Est amin’izao fotoana izao. Ity tetikasa ity izay tontosa tamin’ny alalan’ny fitohizan’asa ny fitondrana nifandimby. Tanjona ny hitondrana vahaolana samihafa ho an’Antananarivo amin’ny lafiny fanajariana ny tanàna.
Fanamboaran-dalana : lalana mirefy 180km mampitohy an’i Katsepy sy Soalala no hatomboka
Fitsidihana ireo district sy fitokanana fotodrafitrasa no nanamarihan'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina ny Androny tsingeritaona naterahanany omaly. Lalana mirefy 180km mampitohy an'i Katsepy s'y soalala no hatomboka ary Efa Tonga any an-toerana n'y fitaovana hanaovana izay. Hiverina hisitraka jiro amin'ny alalan'ny tolotra omen'ny Jirama ny mponina ao katsepy raha ny fanambarana nataon'ny filoha nandritra ny fandalovany tany an-toerana omaly. Notokanan'ny filohan'ny repoblika nandritra ny fandalovany tao Namakia omaly ihany koa ny lalana mirary vato.